Zvinhu gumi Zvakasuwa Sangano Rako Zvinoramba Zvichikuvadza Bhizinesi Rako | Martech Zone
Nezuro, ndakave nemufaro wekuita musangano nedunhu National Vatauri Sangano, kutungamirirwa na Karl Ahlrichs. Kune vatauri veveruzhinji, zvakakosha kuti uve nehupamhi hwewebhu uye ruzhinji rwevapowo vakashamisika kuwana maburi makuru mune yavo zano.
Zvizhinji izvi ndezvekuti iyo indasitiri yachinja zvakanyanya… uye mazhinji masangano haana kuramba akadaro. Kana iwe ukangoisa webhusaiti, zvinoita sekuvhura chitoro pakati nepasina. Ingave yakanaka, asi haisi kuzokutorera chero vatengi. Heano gumi maficha ako agency anofanirwa kusanganisira paunenge uchigadzira saiti yako:
Content Management System - hazvina musoro kuti vamiririri vabatise vatengi vavo kubatwa zvekare kuti vagadzirise uye vagadzirise kana paine akawanda mafirita emitambo manejimendi manejimendi. Zvemukati manejimendi masystem anotendera iwe kuti uwedzere uye nekugadzirisa yako saiti sezvaunoda, kana iwe uchida. Sangano rako rinofanira kukwanisa kuisa dhizaini yako kutenderedza chero chero yakasimba zvigadzirwa zvemukati masystem 'theming injini.
Tsvaga Engine Optimization - kana agency yako isinganzwisise mabhenji ekutsvagisa injini, unofanirwa kutsvaga agency nyowani. Zvakafanana nekuvaka saiti isina hwaro. Tsvaga injini ibhuku idzva renhare… kana usiri mariri, usatarisira kuti chero munhu akuwane. Ini ndaizo sundidzira kuti ivo vatokwanisa kunyange kukubatsira iwe nekutsvaga mamwe akanangwa mazwi akakosha.
Analytics - iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwekutanga kwe analytics uye maitiro ekuona kuti ndeapi mapeji uye ndezvipi zvemukati izvo vashanyi vako vari kutarisisa pazviri kuti iwe ugone kunatsiridza yako saiti nekufamba kwenguva.
Blogging uye Vhidhiyo - Kublogi kunopa kambani yako nzira yekutaurirana nhau, kupindura mibvunzo inowanzo bvunzwa uye kugovana kubudirira netarisiro yako nevatengi pamwe nekuvapa nzira yekutevera, kuburikidza kunyoreswa, uye kutaurirana mukudzoka. Chikafu chako chinofanirwa kushambadzirwa pane peji rega rega. Vhidhiyo ichawedzera toni kune yako saiti - inoita tsananguro dzezvinhu zvakaoma nyore zvakare uye inopa sumo huru kune vanhu vari kuseri kwekambani yako.
Contact Form - Haasi munhu wese ari kuzoda kutora foni ndokufonera, asi ivo vanowanzo kukunyorera kuburikidza nefomu rako rekubata. Yakachengeteka uye iri nyore. Ivo havatombofaniri kuitora ... vanogona kungokutorera iwe account ne online fomu anovaka,formstack , uye iwe uchave unomuka uye unomhanya!
Mobile Kugadzirisa - Yako saiti inofanirwa kutaridzika zvakanaka pane nhare mbozha. Zviri nyore kugadzira nharembozha CSS (masheetetet) iyo inogonesa vashanyi vekufambisa kuti vatarise saiti yako, tsvaga nzvimbo yako, kana tinya chinongedzo kuti ugadzire foni.
Twitter - Sangano rako rinofanira kuvaka mamiriro ekumanikidza epeji rako reTwitter rinoenderana nekumaka saiti yako. Ivo vanofanirwa zvakare kusanganisa yako blog vachishandisa chishandiso senge Twitterfeed kuti otomatiki tweet yako blog blog. Sangano rako rinofanirawo kubatanidza twitter kune yako saiti, kungave kuburikidza neyakareruka social icon kana nekuratidza zviitiko zvako zvazvino uno pane yako saiti.
Facebook - Sangano rako rinofanira zvakare kushandisa yako maraki kune yakasarudzika Facebook peji uye kubatanidza yako blog kuburikidza nekushandisa zvinyorwa kana Twitterfeed.
Mapeji ekutumira - Yakasarudzika-Kufona-Ku-Kuita pane yako saiti kunopa nzira yekubatana kune vashanyi vako uye peji yekumhara inozovashandura ivo kuva vatengi. Sangano rako rinofanira kukurukura nezvesarudzo newe kuti ungatyaire sei zvinotungamira kuburikidza nepeji rega rega rewebhusaiti yako - kuburikidza nemadhodhi, mapepa evachena, mamwe mafomu eruzivo, ebook, kurodha pasi, kuyedzwa, nezvimwewo izvo zvinounganidza ruzivo rwekuonana nekudzoka.
Email Marketing - Vashanyi vewebhusaiti yako havana kugara vakagadzirira kutenga… vamwe vavo vangangoda kunamatira kwekanguva vasati vasarudza kutenga. Tsamba yevhiki nevhiki kana yemwedzi inokurukura ruzivo rwakakodzera uye panguva yakakodzera inogona kungova hunyengeri. Sangano rako rinofanirwa kunge riine iwe kumusoro uye uchimhanya neakatumirwa email ine yakasimba email service provider, senge CircuPress. Yako blog yezvinyorwa inogona kunyange kutyaira otomatiki emaemail emaemail kuburikidza nehurongwa hwavo saka haufanire kunyange kupinda!
Mamwe masangano anogona kusundira kumashure pakuita rese basa iri zvese uye nekunze-saiti ... ini handina basa nazvo. Inguva inguva yavakakwira pamwe nevatengi vavo uye vakanzwisisa kuti kungo pusha yakanaka webhusaiti hakuna kukwana. Mazuva ano, zano rako rinoda kupfuura yako saiti uye rinosanganisira vezvenhau, yekutsvaga injini, uye nzira dzekutengesa dzakawanda.
Attention masangano: Kana usiri kugadzirira vatengi vako ku nyatso shandisa iyo webhu, iwe uri kungotora mari yehafu-dhongi basa. Vatengi vako vari kuvimba newe kuti uvake iwo kuvapo kwewebhu uye zano rinovawanisa bhizinesi.
Tags: masanganobokaAnalyticsBloggingkuonana chimirozvemukati manejimendi systemEmail MarketingFacebookpamapejimobile optimizationSearch Engine OptimizationTwittervhidhiyo kushambadziravlogging
Ndakaita sendaifunga kuti zvese izvi zvaive standard manje. Zvinosuwisa kuti mamwe masangano haasati ari kushandisa chaiyo yemukati manejimendi system!
Bvuma Michael! Nehurombo isu tichine ese maAgency anongoshanda mu niche yavo uye asinganzwisise zvinodikanwa zvebhizinesi kana mikana sezvo vasingaenderane nemafambiro epamhepo, kutsvaga uye magariro enhau. Zvakare, mamwe emabhizinesi ane mhosva - mamwe mabhizinesi haazive mukana wekuti zano rakakura rekupa, saka vanoenda kunotenga nzvimbo yakachipa yavanogona kutenga.
Mune vacuum ese aya hunhu ane musoro, uye sewebhu dev kambani tinovapa kune vatengi vedu, uye zvakatonyanya, senge nharembozha kana inokodzera bhizinesi ravo modhi. Nehurombo mamwe mabhizinesi anotarisa kumusoro blog kana kubata saiti yavo semutoro, saka vazhinji vanosarudza kusaenda nenzira iyi. Maonero avo ndeekuti, sei uchigumburwa nekuedza kuwedzera chifananidzo chitsva kune webhusaiti yedu uye kuigadzirisa kwemaawa mashoma, pandinogona kubhadhara mugadziri wangu kwemaminitsi gumi nemashanu.
Munguva ichangopfuura imwe shamwari yangu yakabudisa webhusaiti yake, uye pandakamubvunza kuti zvakatora nguva yakareba sei, akanga asina chokwadi asi yakanga inopfuura maawa e100 ekutsvakurudza, kudzidziswa pamusoro peShokoPress uye kushandiswa, nekugadzirisa zvakare-zvakanaka, kana iwe ukashandura izvozvo. muchiyero chake cheawa somurairidzi wega (anenge madhora makumi mapfumbamwe), izvo zvinowedzera kumari chaiyo.
Saka, kunyangwe zvinhu zvese izvi zvine musoro, varidzi vebhizinesi vazhinji, kusanganisira yandakataura nayo nhasi, tarisa kubhurogi nezvimwewo serimwe basa, uye rimwe ravasina nguva yekuita zuva nezuva. Saka, kana vaine mugadziri wavo aite basa nekuzvibvisa pane zvavanoda kuita, ini handidaidzi kubatwa senhapwa- ndinodaidza iko kushandisa nehungwaru kwekutonga nguva.
Sep 21, 2010 na3:59 PM
Kubvumirana zvachose, Preston. Nyaya yangu ndeyekuti maAgency haatombokurukure nezvemukana wevatengi vavo kublogi uye kuongorora kana iri zano rinoshanda. Izvo zvinosuwisa.
Hongu, zvakanaka imwe neimwe yemapoinzi aya inofanirwa kukurukurwa uye kuongororwa- kusiya kuapa iko kukanganisa kukuru. Dzimwe nguva zvinoita sekunge ndinoda kukumbira vatengi kuti vadzike mugwagwa weSMM, asi mabhizinesi mazhinji andinosangana nawo haasati atomboda kuibata-chete kana mumwe munhu asiri 'kutengesa' kuita masevhisi anovaratidza zvinogona kuguma, taura. shamwari, vanobva varatidza kufarira.
Ini ndinofunga kutsvaga muganho muhupfumi uhwu, imwe neimwe yemapoinzi aya inofanirwa kune CHESE bhizinesi, asi zvinosuruvarisa kuti kuchine makambani kunze uko ane mawebhusaiti echizvarwa chekutanga anochemera mapeji ekumhara, kufona kuita, uye blog-zvakadaro. varidzi vebhizinesi vanoti "Ini handiwane bhizinesi kubva paInternet." Zvakanaka, lol, hazvishamise… 😉